Qabduuwwan gabatee DataPilot uume keessaa tokko cuqaasiitii qabduu hantuutee gad qabi.Mallattoon addaa qaree hantuuteetti aanee dhufa.
Qabduu tarree sana keessatti gara qubannoo birootti harkisuudhaan tartiiba sarjaawwanii jijjiiruu dandeessa.Yoo qabduu gara qarree bitaa gabateetti bal'ina irraantoowwan taree keessatti harkiste,sarjaa gara tarreetti jijjiiruu dandeessa.
Qabduu gabatee irraa haquuf,gabatee DataPilot irraa harkisi.Qabduu yeroo qareen hantuutee wardii keessa kaa'ame sajoo "hin eeyyamamu" ta'e gad dhiisi.Qabduun ni haqama.
Gabatee DataPilot gulaaluuf,man'ee gabatee DataPilot cuqaasiitii baafata haallee bani.Baafata haallee keessatti ajaja Jalqabi argita,kan qaaqa DataPilot gabatee DataPilot ammeetiif mul'isu.
Gabatee DataPilot keessatti, tartiiba dirreewwan deetaa qindeessuuf ajajoota harkisii-kaa'I ykn muri/maxxansi fayyadamuu dandeessa.
Title is: Gabateewwan DataPilot gulaaluu